Ninkii wadey gaarigii dadka laayey oo danbi lagu soo oogey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ninkii wadey gaarigii dadka laayey oo danbi lagu soo oogey
La daabacay måndag 10 april 2017 kl 14.34
Booliska: gacantaan ku hayaan wadihii gaariga dadka lagu laayey
Dan Eliasson taliyaha ciidamada booliiska dalkaan Sweden. sawir: Anders Wiklund/TT
Taliyaha ciidamada booliiska dalkaan Sweden Dan Eliasson yaa shir jaraa’id oo uu qabtey ku sheegey in ninka loo qabtey in uu ka danbeeyey falkii gaariga ee jimcihii, ay ka hayaan caddeymo farsamo oo xoog leh iyo waliba in isagu uu qirtey in uu ahaa ninkii wadey gaarigaas dadka lagu laayey.
Taliya ciidamada booliiska dalkaan Sweden Dan Eliasson ayaa isagoo arrinkaas ka hadlaya waxa uu yiri:
- Markaan ka hadlo baaritaanadii aan sameyney, waxaan halkaan uga dhawaaqayaa in qofkaan heynaa uu yahay ninkii saxda ahaa ee wadey gaarigii dadka lagu laayey,taasna waa mid aan hubo, ayuu yiri taliyaha ciidamada booliiska dalkaan Sweden Dan Eliasson.
Ninkaan loo hayo in uu gaari xamuul ah dad jiirsiiyey ayaa si rasmi ah waxaa maanta danbigaas loogu soo oogey, hadana booliisku waxay sheegeen in baaritaanka dhacdadaani ay guud ahaan qaadan karto muddo hal sano ah.
Ninkaan 39 jirka ah ayaa in danbigaas maanta lagu soo oogey waxaa cadeeyey ku xigeenka xeer ilaaliyha Hans Ihrman oo dacwada ninkaas maanta horgeeyey maxkamadda magaalada Stockholm.
Ciidamada booliiska ayaa sidoo kale sheegey in ay gacanta ku hayaan nin kale oo tuhunka laga qabaa yahay mid hooseeya, kaas oo ay booliisku ka gaabsadeen in warbixino dheeraad ah ka bixiyaan.
Ciidamada booliska ayaa sidoo kale shirkooda jaraa’id maanta ku sheegey in ay 600 oo wareysi la yeesheen dad kala duwan intii ay falkaan baarayeen, sidoo kalana ay baareen guryo badan oo kala duwan.
Ciidamada booliiska ayaa sidoo kale sheegey in ay isha ku hayaan dadka aaminsan awoodda dadka cadcad ”Vitmakt” oo laga yaabo in ay amniga dalkaan khalkhal galiyaan.